Misoro yeNhau, Muvhuro 21 Gumiguru, 2019
Nhengo dzemakereke anodarika mazana matatu dzinoungana kumuzinda weState House pakuparurwa kwechirongwa chekunamatira nyika, icho chiri kutungamirwa nemudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Auxilia Mnangagwa.
Vanorarama nekutengesera mumigwagwa gumi vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita neheremeti dzemapurisa dzakawanikwa pa Robinson House muHarare vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zana remadhora pamunhu.
Bazi rehutano roronga kuparura chirongwa chekudzidzisa vashandi vehutano vemuzvipatara zvehurumende kuti vazive mutauro wemaoko senzira yekurerutsa dambudziko ravanosangana naro kana vachinge vashanyirwa nevarwere vanoshandisa mutauro wemaoko.
Nhasi tiri kutarisa pamusoro pehurongwa hwesangano re sadc hwekubatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika nevekumawirira zvibviswe. SADC yakatara musi wa 25 Gumiguru sezuva rekurwira kubviswa kwezvirango izvi.
Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chinobudirira kuenda kumafainari e 2020 Africa Nations Championships (CHAN) asi vamwe vatsigiri venhabvu vaine mibvunzo.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm tiri kutarisa nezve hurongwa hwegungano renyika dziri muSADC hwekubatana neZimbabwe neChishanu chino pakurudziro yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe.